Ny fijery sy ny feo avy amin'ny "Bosch" (lahatsoratra 3 avy amin'ny 3) - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat, Fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny fijery sy ny feo avy amin'ny "Bosch" (lahatsoratra 3 amin'ny 3)
Ny fijery sy ny feo avy amin'ny "Bosch" (lahatsoratra 3 amin'ny 3)
Sary avy any an-toerana Bosch ekipa, miaraka amin'ny mpanoratra Michael Connelly faharoa avy amin'ny ankavia ao amin'ny lohalaharana sy ny mpamokatra mpanoratra Tom Bernardo eo ankavanan'i Connelly. Ny mpamokatra mpanatanteraka, Pieter Jan Brugge (am-patana) dia mivantana avy any Connolly any aoriana.
Ny lahatsoratra roa voalohany amin'ity andiany ity dia mifantoka amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpitantana sy mpilalao sarimihetsika izay manome ny Amazon Prime Video Bosch Ny fahitalavitra dia ny endriny maizim-pito sy mazava. (Ny andian-dahatsoratra dia mifototra amin'ny tantara ny mpitsongo nataon'i Michael Connelly, izay ihany koa ny mpanatanteraka mpamokatra ny fandaharana.) Ao amin'io fizarana farany, aho, dia hiteny amin'ny mpanakanto izay manome ny fampisehoana ny feo tsy manam-paharoa, manomboka amin'ny andian-dahatsoratra ' mozika mpamorona Jesse Voccia.
Ny mozika Bosch dia tokony hisaintsaina ny rivotry ny haizina sy ny fihetseham-po manodidina ny tantaran'ireo tantara notantarainy. Soa ihany, Voccia, izay efa niasa tamin'ny sarimihetsika 60 teo aloha, dia nahatonga izany fanamby izany. Nolazainy tamiko ny fomba nanatevin-daharany ny ekipa mpamorona. "Rehefa tafiditra tao amin'ilay pilotako izahay, dia kely dia kely ny fotoana," hoy izy nanazava. "Enim-bolana teo ho eo izahay no nanamboatra ny endriky ny mozika ary avy eo dia nitazona ny fizarana rehetra. Asehoy ny mpihazakazaka Eric Overmyer sy mpamokatra mpamokatra Pieter Jan Brugge tonga tao amin'ny efitranom-pandriako ary dia nisy ireo fifanakalozan-kevitra mahazatra momba ny Bosch Tokony hanana fihetseham-po ny mozika. Niresaka momba ny sarimihetsika hafa, mozika ary boky izahay, niresaka momba ny tanàna samy hafa tao LA sy ny fomba nanoratana azy ireo tamin'ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra nandritra ny fotoana. Hatramin'ny fivoriana voalohany, mazava ho azy fa tsy tian'ny tarika nentim-paharazana malaza izy ireo. Naniry izy ireo Bosch Manana karazana mozika bebe kokoa na manintona kokoa. Ny mozika dia mifamatotra amin'ny tolona anaty sy ny fizotry ny saina fa tsy ny asa atao hita maso eo amin'ny efijery.
'Nandeha andro vitsivitsy aho ary niakatra niaraka tamin'ny ankamaroan'ny fizarana voalohany. Soa ihany fa tiako izy ireo. Mora ilay izy satria fantatr'izy ireo ny zavatra tiany ary noraisinay ny fotoana mba hiresahana izany. Afaka nahita ny fomba fiasa tsara tamin'ilay fampisehoana aho avy eo. Taorian'ny vanim-potoana maromaro, dia namela fahaizana lehibe hifandraisana momba ny mozika izahay. Ny karazana fampisehoana dia nihanitombo ary be dia be. Manana traikefa sy fisainana maro be izao isika izao mba hanomboka hizara ny mozika. "
Rehefa nanontaniana momba ny fametrahana an'i Bosch ho an'ny tetikasa hafa izay niasany izy, namaly i Voccia hoe: "Ny zavatra voalohany manipika dia ny 'fampiharana ara-pitsipi-pitenenana.' Ny vanim-potoana tsirairay avy Bosch dia toy ny boky misy toko, fa tsy andian-tantara episodes. Amin'ny fomba maro dia toy ny horonan-tsary 10 ora izy io. Izany dia ahafahantsika manohy ny tantaram-piainana amin'ny antsipirihany amin'ny 'antsipiriany' amin'ny 'dingana fandrosoana.'
"Ao anatin'ny rafitra misy antsika, dia mamela fotoana hifantohana amin'ny endrika samihafa amin'ny endrika sy ny fifandraisana. Afaka mamela ny ankamaroan'ny mozika amin'ny fomba mahazatra sy tsy maintsy atao ihany koa izy io ary mamorona zavatra antsoiko hoe 'Bosch Burn'. Ny fivoahana dia noforonina rehefa mitohy ny tantara ary mihamitombo ny fihenjanana ary manorina ary tampoka dia misy ny tena zava-misy sy ny fahatsapana ny toe-javatra misy sy ny toerana misy azy. Matetika ny mozika dia ampidirina amin'ny alàlan'ny fifandraisana, dia manana fironana ny famotsorana ity fihenjanana mitohy ity ary manosika ny fomba fitantarana tantara avy amin'ny poezia ho poezia. Ny iray amin'ireo olako tena lehibe amin'ny fampisehoana dia ny fomba hiarahan'ny mozika amin'ny fampisehoana tantara, manome fandaniana ara-pihetseham-po fanampiny na fitantarana tantara, mivoaka ary mbola mitazona ny fandoroana. Bosch Araka ny fampisehoana iray dia misy fomba iray mampiavaka ny mason-koditra ary manaparitaka ny tsato-kazo. Amin'ny fampiasana mozika amin'ny fampihetseham-pomba mandaitra, raha oharina amin'ireo fomba fanao mahazatra, dia afaka mitondra zava-baovao amin'ny zavamaniry isika. Maro ny eritreritra mandroso ka manomboka ny mozika ary mijanona Bosch. "
Nolazaiko tamin'i Voccia fa mihaino ny mozikany Bosch, Efa naheno ny fizarana izay manamarika an'i Bernard Herrmann sy ireo andinin-tsoratra masina hafa izay nampahatsiahy ahy an'i John Barry, indrindra fa ny fampiasana kofehy. Nanontany aho raha toa ka nisy fiantraikany teo amin'ny asany ireo mpamorona sarimihetsika roa malaza ireo. "Tena!" Hoy ny navalin'i Voccia. "Ny lahatsoratr'i Bernard Herrmann ho an'ireo horonantsary Hitchcock dia tena nanan-kery be tamiko. fiarakaretsaka Driver, Fahrenheit 451, ary Fanina Miverena matetika ao amin'ny fahatsiarovako mozika. Ny fampiasan'i Hermann ny sakan-drakotra miverimberina sy ireo antokom-pinoana tsy miangatra ary ny orkestra dia manentana tsindrimandry tsy misy fiafarany. Misy ihany koa ny hatsikana momba ny mozikany izay milaza hoe 'antitra Hollywood'amin'ny fomba izay tsy misy olon-kafa manao ahy ary indraindray miezaka ny mampiditra ny sasany amin'izany Bosch amin'ny maha-ampahany antsika amin'ny tany Los Angeles/Hollywood tontolo iainana.
"Notsarovan'i John Barry ny fahatanorako. Nandika vilana an'i James Bond aho ary nijery imbetsaka ireo sarimihetsika ireo. Tahaka ny tiako ny sora-baventy nosoratany izay tena nahazo ahy dia ny biriky sy vibis tery. Ny iray amin'ireo fialam-boly tiako indrindra dia ny fomba azony hampidirana anao any amin'ny tontolo tsy misy hafa avy hatrany, na mandeha eny ambony rano ianao, midina ala maizina, na tsy misy dikany.
"Heveriko fa eo amin'ireo mpilalao horonantsary sarimihetsika dia misy karazana Beatles vs. Stones zavatra mandeha miaraka amin'i John Williams sy Jerry Goldsmith. Nifantoka tamin'ny ekipa Goldsmith foana aho. Chinatown dia ampahany lehibe amin'ny adihevitra voalohany momba izany Bosch ary tsy mbola nahazo izany mihitsy aho. Amin'ny fombako manokana, miezaka ny hiasa amin'ny sasany amin'izany fitaomam-panahy izany aho ao anatin'ireo fitaovana, atmosfera ary zavatra hafa. Chinatown Ny voalohany dia nanana fe-potoana marina ary ny tsirairay dia nankahala izany. Ny mpanefy volamena dia niditra an-tsokosoko haingana ary nanao zavatra tena saro-kenatra sy tsy mahazatra. Miezaka ny hitondra ity lesona ity amiko isaky ny mipetraka aho hanoratra.
"Mpilalao iray hafa izay nisy fiantraikany lehibe tamiko izay heveriko fa miseho ao amin'ny Bosch mozika dia Toru Takemitsu. Ny fampifangaroana singa mozika mafonja sy malefaka ary ny fampifangaroana ny mozika amin'ny feo momba ny tontolo iainana dia lesona izay ampiasaiko matetika amin'ny fampisehoana. Ny fijerena ny sarimihetsika, izaho dia mbola manjavozavo amin'ny tranonkala izay manenika ny tantarany. Ny endrik'i Frantsa Impressionista miaraka amin'ny mozika Japone nentim-paharazana dia tena tsy hay tohaina mihitsy. Ny fandaharana ny mozikany, ny fidirana sy ny fivoahana dia mahavariana toy ny mozika. "
Nambarako tamin'i Voccia ihany koa fa nahatalanjona ahy tamin'ny fampiasana ny fandraisam-peo artista hafa Bosch. Iray kely arahina mozika izay noheveriko fa manohina ny fo indrindra tany am-piandohana ny fizaràna "Ra Eo ambanin'ny Bridge" (Season 3, Episode 5), rehefa mitsidika mpitsongodia polisy roa ny vehivavy ny mampahafantatra fa ny zanany no hita namono. Ny seho dia niaraka tamin'ny horonantsarin'i Charlie Haden ny "Going Home". Nanontaniako an'i Voccia ny fomba fanapahan-keviny amin'ny fotoana sy ny toerana fampiasana an-tsoratra amin'ny toerany. "Ity no 100% Michael Connelly," hoy izy namaly. "Manana fitiavana lalina sy fahalalana momba ny mozika jazz izy. Izy mihitsy aza dia nanao horonantsary fanadihadiana momba ny antso an-tariby Frank Morgan Sound of Redemption. Michael Connelly dia nahafantatra hoe iza no nilalao tamin'ny alàlan'ny jazz albums ho toy ny kilalao amin'ny baolina tranainy. Betsaka amin'ireo safidy mozika ao amin'ny fampisehoana dia tonga avy ao amin'ny bokiny. Harry Bosch dia mpankafy jazz lehibe ary misy famandrihana matetika amin'ny ampahany voafaritra amin'ny hira sasany ao amin'ireo boky.
"Anisan'ny faritra tena tiako amin'ilay fampisehoana izany. Feno fankasitrahana aho fa afaka mampiasa ny rakitsoratra marina. Manamboatra ny atmosfera izay mafana sy mahatalanjona ary be pitsiny. Maneho an'i Harry Bosch ho tsara tanteraka izany ary miteraka lalindalina kokoa ny toetrany sy ny fampisehoana amin'ny ankapobeny. Tena manampy ahy koa ny mitazona ahy ho toy ny fanoherana ny mozika izay noforoniko. Ny fifandraisana amin'ny titans dia mampientam-po. Indraindray dia hiantso ny rahalahiko aho, izay mpiangaly mozika ihany koa ary miteny hoe "Inona no ataoko? Tsy misy na inona na inona ... fa manoratra fotsiny ny valiny izay nivoaka avy amin'ny sasany Coltrane! "
Voccia dia nandeha tamin'ny antsipiriany momba ny fametahana ny mozika. "On Bosch ary amin'ny ankabeazako, dia milalao ny fitaovana rehetra ankoatra ny trompetra aho, "hoy izy nanazava. "Ny fampifangaroana zava-maneno marina ho an'ny virtoaly dia ny 60 / 40. Izaho ihany koa dia manamboatra sy mikambana avokoa. Tiako ny milalao mozika ary tiako ny engineering.
"Ho an'ny mpanara-maso dia mampiasa PMC IB1s, Genelec 1030s ary mpandika teny Auratone kely aho. Saika ny zava-drehetra dia voarakitra amin'ny alalan'ny baoritra BAE 1084 roa miaraka amin'ny Bootsy Mod amin'ny dingana roa Apollo UA. Iray amin'ireo Apollos dia natao haka an-tsoratra ary ny iray hafa dia napetraka ho toy ny parchbay noho ny fanangonam-bokiko avy amin'ny 70 sy 80 hafa. Manana Korg SDD-3000, iray Roland RE-201 Space Echo, ny Diksionera PCM60, 70 & 80, ary ny Seigneur H3000 natsangana toy ny mandefa avy Digital les mpanakanto. Ny fitaovam-piadiana miafina dia ny Lexicon Prime Time 93 avy amin'ny 1979. Ampiasako izany mba hamoronana karazan-tarehy tsara tarehy sy samples rehetra miaraka amin'ny kirany 256ms amin'ny faharetan'ny fahatsiarovan-tena. Ho ahy, dia ny ampahany mozika indrindra amin'ny fitaovana fanodinana fantsom-panafika efa nomanina hatramin'izay. Mihoatra lavitra noho ny fahatarana.
"Tena tiako ny manamboatra ny teknolojia, noho izany dia nanangona karazana vorona, compressors, EQs ary mikrofona hafahafa hafahafa aho. Ho ahy, ny lokon'ny feo dia matetika mampihetsi-po kokoa noho ny fanamarihana marina. Raha tsy manana ny feony marina aho, tsy misy ny fanamarihana hahatsapa ny marina, fa amin'ny feony marina dia manondro anao fotsiny ny fanamarihana fa manomboka manoratra ny mozika. Izaho koa dia manana 'tsy mifehy' ny toe-javatra mahazatra modely izay ampiasaiko indraindray toy ny loharano mampiavaka ny VCOs isan-karazany, fa indrindra amin'ny lafiny fanodinana fahitalavitra. Fialam-boly maro izany. Ny singa modular ho ahy dia ireo mpamorona herinaratra madio ary dia tena ao anatin'ny vanim-potoana volamena miaraka amin'ireo mpanakanto mahay manamboatra ny mozika vaovao. Izy io dia mamerina mamela ny fialana amin'ny efijerin'ny ordinatera mandritra ny fotoana fohy ary very ao anatin'io fikorontanana io.
"Tena tiako ny mandany fotoana betsaka araka izay azoko atao amin'ny fanombohana ny tetikasa manangona feo sy tontonana izay mety hampiasaina amin'ny isa. Mitady foana an'io feo sonia io foana aho. Indraindray dia sehatra misy tsipika izay mamorona ny 'toe-tsaina', indraindray dia fitaovana virtoaly vaovao nataoko tao Reaktor na banky iray an'ny solosaina noforonina tao anaty synth. Indraindray dia Lute 15-string avy any Ejipta aho no nahazo ny Ebay voarakitra an-tsoratra kely fotsiny. "
Ao amin'ny lahatsorany voalohany amin'ity andiany ity, ny talen'ny Laura Belsey dia nametraka ny "fantsom-pahitalavitra" mahagaga ho an'ny fiderana rehefa niresaka momba ny toerana fitifirana. "Gaga aho fa tena tsara ny fandrenesana rehefa nieritreritra ny fahagagana izay nitabataba ny sasany taminay," hoy izy.
Ny mpikambana iray manan-danja ao amin'io departemanta io dia ny fanamafisam-peo Scott Harber, CSA, izay namolavola ny zava-tsarotra izay noraisin'i Belsey. "Ny fametrahana fifanakalozan-dresaka madio eo amin'ny arabe be olona sy eo amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny dia asa iray izay ezahazaintsika matetika handaminana Bosch," nilaza tamiko izy. "Tahaka ny vokatra rehetra mitifitra eo amin'ny toerana, miezaka ny mifehy ny ara-dalàna isika ary manome lahatsary fifanakalozan-dresaka matanjaka izay afaka manampy telegraph ny teny sy ny tantara. Manao izany isika amin'ny alalan'ny fitaovana hafahafa toy ny fitantanana ny fifamoivoizana sy ny fampiasana malalaka mics. Ankoatr'izany, ny fiaraha-miasa amin'ny sampana fakantsary dia manan-danja lehibe, hany ka azontsika atao ny manalavitra ny tanjona hamehezana ireo lantom-peo lehibe sy mafy. Izany dia misakana ny olan'ny haino aman-jery maheno matetika ny fisian'antsam-basy malalaka amin'ny fihainoana ny lavaliera mihenjana sy manjavozavo izay manohitra ny zavatra hitany. Raha tsy misy ny fanampian'ny Talen'ny Saripika an-tsehatra, dia tsy ho azo atao izany amin'ny lafiny rehetra, ary i Patrick Cady sy Michael McDonough dia mahatakatra ny tontolom-pifanarahana sy ny tanjon'ity tantara ity amin'ny fampisehoana.
"Ny fototry ny rafitra izany andro izany dia ahitana ny manam-paharoa Aaton Cantar X3 mpitam-boky, izay efa nanao ny dingana sy ny miasa tena Nimble, matanjaka, ary sonically uncompromised. Ny feo sy ny fanamafisam-peo dia nahafahako nifangaro kokoa sy nafana kokoa noho ny taloha izay tian'ny lahatsoratra mba hijery sy handre. Tiako koa ny rojom-pirahalahiana metadata sy ny fomba azo antoka ny fomba rehetra hanamboarana ny rafitra manontolo. Mampiasa rafitra Wireless Wireless izahay ho an'ny boomers ary koa mpilalao tantaninay miaraka amin'ny DPA 4071 na 6061 mics. Ny DPA dia mamakafaka tsara amin'ny moom boom ary manamboatra tsara ireo fiakanjo rehetra samihafa atrehantsika. Ao amin'ny boom baony, isika dia mirona amin'ny hampiasa Sennheiser MKH 50s, Schoeps CMIT ny, na ny ho an'ny CS3e Sanken fitaomana bebe kokoa arakaraka ny sahirana. "
Fans ny Bosch dia ho faly ny mahafantatra fa efa navaozina nandritra ny vanim-potoana fahenina ity andiany ity. Ao amin'ny tafatafa tamin'ny Tampa Bay Times tamin'ity Aprily ity, Dia nanambara i Connelly fa hiorina amin'ny andiany 2007 ny vanim-potoana manaraka The Overlook, saingy nanampy izy, "miaraka amin'ny fanavaozam-baovao sasany. Niorina tamin'ny fampihorohoroana izany; ankehitriny dia midika izany ny fampihorohoroana ao an-tokantrano. "Misy ihany koa ireo singa sasantsasany avy amin'ny tantara nosoratan'i Connelly farany momba an'i Bosch Dark Sacred Night, Midika mivantana fitohizan'ny ny storyline naorina eo amin'ny faran'ny Season dimy izay Harry nanomboka mijery ny hatsiaka raharaha famonoana ny vavy Elizabeth Clayton (Jamie Anne Allman), iray mpidoroka zava-mahadomelina dia nihaona rehefa nandeha miafina mba Bust tsy ara-dalàna opioid racket. Azoko antoka fa miresaka amin'ny mpankafy an'i Harry Bosch (sy Michael Connelly) aho rehefa miteny aho fa manahy mafy ny vanim-potoana fahenina (ary antenaiko tsy farany).
Azo jerena ny fizarana 1 amin'ity andiany ity Eto ary ny ampahany 2 Eto. Tiako ny hisaotra an'i Allie Lee, Lead of Publicity ao amin'ny Amazon Prime Video, noho ny fanampiany tena sarobidy amin'ny fanaovana lahatsoratra maromaro azo atao.
Doug Krentzlin dia mpilalao sarimihetsika, mpanoratra, ary mpahay tantara momba ny horonantsary sy ny TV izay monina any Silver Spring, MD miaraka amin'ny saka Panther sy Miss Kitty.
Personalities & Profil: Mike Baldassari - Oktobra 18, 2019
Personalities & Profil: Amy DeLouise - Oktobra 15, 2019
Personalities & mombamomba azy: Kelley Slagle - Oktobra 15, 2019
Amazon Prime Video Bernard Herrmann Bosch HOAN'NY FOR-A, rafitra vitsivitsy, Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Jerry Goldsmith Jesse Voccia John Barry Michael Connolly Spears & Arrows Toru Takemitsu TV Technology Ultra HD Forum Variant Systems	2019-06-13
Previous: Sekoly SMPTE Hollywood mba hijery ny ho avin'ny VRV tsy azo atao amin'ny fivoriana Jona
Next: Manambara ny fanitarana ny tsena Amerikana i Danacoid amin'ny famoahana ny foiben'ny Silicon Valley amin'ny InfoComm 2019